इमेज साप्ताहिक : 2020-03-08
यो नुवाकोट जिल्लाबाट सोमवार प्रकाशन हुँदै आएको इमेज साप्ताहिकको ब्लग हो । प्रकाशकः कपिलदेव खनाल, कार्यालयः विदुर नगरपालिका–४, नुवाकोट, फोनः ०१०–५६१६७८ सम्पादकीय ९८५१०९३२९० सम्पादकः शर्मिला उप्रेती
स्व. श्यामकृष्ण श्रेष्ठ
जन्म : २०१२-३-१५
स्वर्गारोहण : २०७६-१०-१२
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा साविक चतुराले वडा नं. ४ नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष ककनी गाउँपालिका वडा नं. ७ निवासी श्यामकृष्ण श्रेष्ठको असामयिक स्वर्गारोहण भएकोमा हामी अत्यान्त दुःखी एवं मर्माहत भएका छौं । दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको लागि ईश्वरसंग प्रार्थना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं । साथै यस दुःखको घडिमा शोक सन्तप्त परिवारजनमा धौर्य धारणा गर्ने शक्ति प्रदान गरुन् भनि भगवान श्री पशुपतिनाथसंग प्रार्थना गर्दछौं ।
सम्झना सेंढाई, सदस्य
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट एवं परिवार
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Saturday, March 14, 2020 No comments:
नेपाली काँग्रेस ककनी गाउँपालिका ७ चतुराले परिवार
जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति नुवाकोटको समन्वयमा
युएनह्याबिट्याट, पुनर्जागरण समाज नेपाल र डिकोन नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
– स्थानीय स्तरमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरौं ।
– प्रयोगकर्तामैत्री चर्पी निर्माण गरी सबैले सँधै चर्पीको प्रयोग गरौं ।
– घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कार्यालयहरुमा साबुन पानीले हातधुने, महिलाको मासिक धर्म ब्यवस्थापनको सुविधा व्यवस्था गरी ब्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिऔं ।
– सबैले सधै सफा र शुद्धिकरण गरिएको सुरक्षित पानी मात्र पिउने गरौं ।
– सुरक्षीत खाना खाउँ, खाद्य स्वछतालाई ध्यान दिउँ ।
– घर, आँगन, टोल, सडक, स्कुल, सघंसस्था नियमित सरसफाइ गरौं, फोहोरको उचित ब्यवस्थापन गरौं ।
– बस्ती, टोल वरपर वृक्षारोपण गरी हरियाली पार्क निर्माण गरौं ।
– नदीनाला, पोखरी, तालतलैया वरपर फोहोर नगरौं ।
– धुवाँमुक्त भान्छाको लागि सुधारिएको चुलो प्रयोग गरौं ।
– सन् २०३० भित्र नेपाललाई पूर्ण सरसफाई उन्मुख राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरौं ।
चिस्यान केन्द्र जडान सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६\_११\_२८
नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्धारा संयुक्त रुपमा सञ्चालित सहकारी बजार विकास कार्यक्रम नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । यस कार्यक्रम अन्र्तगत यस जिल्लामा छनौट भएका सहकारी संस्थाहरुमा फलफूल तथा तरकारी संकलन तथा भण्डारणका लागि निर्माण गरिएको संकलन केन्द्रमा चिस्यान केन्द्र जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र बोलपत्रको माध्यामबाट चिस्यान केन्द्र जडान गर्नुपर्ने भएकोले ईञ्छुक इजाजत प्राप्त फर्म, संस्था तथा कम्पनीले यस सम्वन्धि विस्तृत सूचना, ठेक्कापट्टाका शर्त, फारम भर्ने तरिका, फारम दस्तुर र बिडबण्ड रकम सम्वन्धी जानकारी प्राप्त गर्न तल दिइएको इमेलमा इमेल गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । सोही सूचना, शर्त आदिको आधारमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन साँझ ५ः०० बजे भित्र यस जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटको कार्यालयमा वा सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौंमा आफ्नो बोलपत्र पेश गर्न सूचित गरिन्छ ।
सहकारी बजार विकास कार्यक्रम
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, नुवाकोट
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नुवाकोट, विदुर
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Thursday, March 12, 2020 No comments:
विदुर\_कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित खतराबाट जोगिन जिल्लामा कार्यक्रम, सभा सम्मेलन आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । जिल्ला बिपद् ब्यबस्थापन समिति नुवाकोटले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका जिल्लामा उच्च सर्तकता अभियान थालेको हो । समितिको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सबैलाई सचेत हुन र स्वस्थ्य व्यवहार गर्न आब्हान गरेको छ । भाईरसको सङ्क्रमणबाट बच्न भिडभाडमा नजान, जिल्ला भित्र सभा सम्मेलनको आयोजना नगर्न समेत सबैमा आग्रह गरेको छ ।
अन्तरक्रिया गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका, जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीहरूलाई भाइरसले छिट्टै प्रभाव पार्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन र अन्य व्यक्ति सम्पर्कमा आउँदा तीन फिटको दुरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।
कोरोना भाइरस हावामा एक मिनेट र मानव शरीरमा चौध दिनसम्म मात्रै जिवित रहन सक्ने हुँदा संक्रमण स्वस्थ्य व्यवहारले नियन्त्रण गर्न सकिने बताईएको छ । यसका साथै, होहल्लाको पछाडी लागेर नआत्तिन समेत आग्रह गरेको छ । समितिको बैठकले जिल्ला भित्र उपभोग्य सामाग्रीको कालो बजारी हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ । उपभोग्य सामाग्रीको कृतिम अभाब सिर्जना गर्दै कालोबजारी हुने भएकाले त्यस प्रति सचेत रहदै प्रहरी प्रशासनमा खबर गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
संक्रमण देखिएमा उच्च ज्वरो आउने, स्वासप्रस्वासमा समस्या, लामो समयसम्म रुघाखोकी लागिरहने लक्षण देखिए तत्काल चिकित्सकसँग परामर्श लिन सुझाव दिएका छन् । जिल्ला भित्र रोगको संक्रमण देखिए छुट्टै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत समितिले जनाएको छ ।
बिदाको दिनपनि खुल्न थाले स्कुल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा यथाशीघ्र प्रारम्भ गरी चैत ५ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्न आह्वान गरेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण र संत्रास बढ्दै गएको सन्दर्भमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन उपयुक्त हुने भन्दै मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘बिद्यालयमा सभा, समारोह, वार्षिक उत्सवलगायतका जनभेला हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू आयोजना नगर्न, नगराउन पनि उल्लेख छ । यही निर्देशनका कारण अहिले जिल्लाका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूले आफ्नो शैक्षिक गतिविधिको चाप बढाएको छ । शनिवार, आइतवार र आज सोमवारको सार्वजनिक विदालाई पनि विद्यालयहरूले प्रयोग गरेका छन् । विदाको दुई दिन नियमित रुपमा प्रायः विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने आज सोमवार पनि विद्यालय आउनका लागि विद्यार्थीहरूलाई आव्हान गरेका छन् । छिट्टै पाठ्यक्रम सक्काएर बार्षिक परीक्षा लिने तयारीमा विद्यालयहरू देखिएको छ । चैत ५ गतेभित्रमा सम्पूर्ण परीक्षा सक्ने गरी नुवाकोटका विद्यालयहरूले कार्यतालिका बनाएका छन् ।
विद्यालयमा हुने जनघनत्व र त्यसबाट बढि हुने भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले विद्यालयहरू छिट्टै खाली गराउन लागेको हो । शैक्षिक गतिविधिहरू रोकिदा शहरी क्षेत्रबाट गाउँ जाने नागकिरहरू बढ्ने र त्यसको फाईदा बढि काठमाडौंलाई हुने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौं कोरानाको उच्च जोखिममा रहेकोले कमेसम्म काम नागरिकहरू उतप्यकामा रहुन् भन्ने अभिप्रायले सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
फागनुको २३ र २४ गते बस्ने भनिएको नेकपा नुवाकोटको बैठक कोरोना भाइरका कारण स्थगित भएको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण विश्वब्यापी रुपमा फैलिदै गएको सन्दर्भमा त्यसबाट पर्न सक्ने असरको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बैठक स्थगित गरिएको नेकपा नुवाकोटले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको निर्देशन अनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको पार्टीले जनाएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय पुर्व नै नेकपाले यो कार्यक्रम स्थगन गरिसकेको थियो ।
जिल्ला बिपद् ब्यबस्थापन समिति नुवाकोटले औपचारिक कार्यक्रम, सभा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरेसंगै जिल्लामा आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रमहरू सबै रद्द भएका छन् । शुक्रवारदेखि यता जिल्लाका कुनै औपचारिक कार्यक्रम र सभा समारोहहरूको आयोजना गरिएको छैन । शुक्रवार विदुर नगरपालिकाले नगर सभाको आयोजना गरेको थियो । कोराना भाइरसका कारण लामो समयसम्म औपचारिक कार्यक्रम गर्नका लागि समस्या हुने अनुमान गर्दै नगरपालिकाले शुक्रवार नै आफ्नो नगरसभा सक्काएको हो ।
त्यस अघिनै कार्यक्राको निर्धारण गरेको सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, कार्यलयहरूको कार्यक्रम सबै रोकिएका छन् । कोरानोको त्रानस अन्तय भएपछि मात्रै कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरी सबै संघसंस्थाहरूले नागरिकहरू बढि भेला हुने कार्यक्रम र गतिविधिहरू स्थगन गरेको हो ।
ग्यास, चामल दुई महिनालाई स्टक
कोरानो भाइरसबाट बच्नका लागि अपनाईएको पुर्व सावधानीको असर नुवाकोटको बजारमा भटाभट देखिन थालेको छ । नुवाकोटका प्रमुख बजारहरूमा खाद्यान्न र ‘स्टोर’ गर्न मिल्ने सामाग्रीहरूको खरिद चाप उपभोक्ताहरूले ह्वात्तै बढाएका छन् ।
बजार क्षेत्रमा बसोवास गर्ने उपभोक्ताहरूले दैनिक खाद्यय सामाग्री, नुन, तेल मसाला, ग्यासको माग ह्वात्तै बढाएपछि बजारमा अभाव हुन थालेको छ । नियमति रुपमा खरिद गरिरकेको मात्रामा निक्कैनै बढि खरिद गर्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । धेरैले कम्तिमा दुई देखि तीन महिनालाई पुग्ने चामल, दाल, तेल, नुन ‘स्टक’ राखेका छन् ।
अरुले खरिद गरेको देखेर पनि चाहिने भन्दा बढी सामाग्री उपभोक्ताले खरिद गर्न थालेका छन् । एक खरिदकर्ता भन्छन् –‘काठमाडौंमा धेरै कुरा सटेज हुनथाल्यो भन्ने सुनिरहेको थिए, नुवाकोटमा पनि धेरैले खाद्य सामानहरू दुई तीन महिनालाई पुग्ने गरि किनेको देखेर मैले पनि राखेको छु ।’ यसरी उपभोक्ताले स्टोर गरेर राख्ने खरिद सामाग्रीमा बढि एलपीग्यास रहेको छ । भुकम्पको समय र भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बेलामा ग्यासका कारण जीवन अस्तब्यस्त रहेको स्मरण गर्दै नागरिकहरूले ग्यास स्टोरको मात्रालाई बढाएका छन् । ‘चामल गाउँबाट मिलमा कुटाएर ल्याउला, गुन्द्रुक खाउँला, अब ग्यास भएन भने त दाउरा खोज्न कता जाउ ?’ एक उपभोक्ताले भने ।
उपभोक्ताहरूको यही उच्च मागको मौका छोपेर ब्यापारीहरूले पनि केही उपभोग्य सामाग्री लुकाउन थालेको अनुमान गरिएको छ । अत्यावश्यक सामाग्रीहरू बजारमा अभाव हुन थालेको उपभोक्ताहरूले बताउन थालेका छन् । अरुले अभाव हुन्छ भन्दै किनेको देखेर चाहिने भन्दा बढि मात्रामा सामाग्री उठाएकै कारण जिल्लामा उपभोग्य सामाग्रीहरूको अभाव सृजना हुन थालेको हो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने त्यस्ता अभावको अवस्था नआउने भन्दै नआत्तिन र चाहिने भन्दा बढी सामान खरिद गरेर अभाव सृजना नगराइदिन आग्रह गरेको छ । साथै ब्यापारीले सामाग्रीको अभाव सृजना गरेमा वा अभावको नाममा मुल्य बढाएमा खबर गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसो त नुवाकोटको बजारमा खाद्यान्न बाहेकका अन्य सामाग्रीहरूको अभाव मात्रै भएको छैन मुल्य समेत बढेको छ । इलेक्ट्रोनिक्स सामाग्री र लत्ताकपडा अहिले माग अनुसारको बजारमा नपाइएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै सोही सामानमा अहिले १५ प्रतिशतसम्म मुल्य वद्धि भएको समेत बताइएको छ ।
औषधि तीन महिनालाई छ
नेपाल औषधि उत्पादक संघले कोरोना भाइरस विश्वव्यापी बनिरहेका बेला आउन सक्ने सम्भावित संकटका क्रममा नेपालमा औषधि अभाव हुन नदिने स्पष्ट पाारेको छ ।
संघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा ३ महिनासम्म औषधि अभाव नहुने स्पष्ट पारेको हो । त्यस्तै यसअघि नै ल्याइसकेको कच्चा पदार्थ पनि धेरै रहेकाले औषधि अभाव हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने संघका महासचिव विप्लवबहादुर अधिकारीले बताए । नेपालालई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने क्रममा एलोपेथिक औषधिका ६२ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको र अरु ४२ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पनि संघले जनाएको छ । महासचिव अधिकारीले हाल भारतले २६ प्रकारका औषधि र कच्चा पदार्थको निर्यातमा रोक लगाएको स्मरण गराउँदै अधिकारीले नेपालमै उत्पादित कुनै पनि औषधिको अभाव हुन नदिने बताए ।
कोरोनाको संत्रासले सुनसान नाका
रसुवा\_कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण पछिल्लो एक महिनायता रसुवागढी नाकाबाट आउजाउ तथा आयात–निर्यात ठप्प भएको छ । अहिले नाकामा सुरक्षा अधिकारीहरू र केही स्वाथ्यकर्मीहरू मात्र छन् ।
नाकामा सवारी साधन चलेका छैनन् भने पर्यटकहरूको पनि आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द रहेको नाकामा रहेका सुरक्षा अधिकारीहरूले बताए । केरुङमा रहेका नेपालीहरू भने फाट्टफुट्ट आइरहेका छन् । रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार टिमुरेको भन्सार यार्ड पनि खाली भएको छर । आयात–निर्यात ठप्प हुँदा राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको खड्काले बताए । नाकामा दुवै देशतर्फका सरकारी कार्यालयहरू भने खुलै छन् ।
चीनबाट आयात हुने धेरैजसो सामग्री २०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट आउने गरेको थियो । यो नाकालाई २०७४ भदौ १४ गते चीन सरकारले अन्तराष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको थियोर । रसुवागढी तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउनेसहित नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चिनियाँ सामग्रीको हिस्सा १६ प्रतिशत हो । गत वर्ष चीनबाट २ खर्ब ५ अर्बको सामग्री आयात भएको थियो ।
यो वर्ष आयात बढेर चीनको हिस्सा बढ्ने क्रममा थियो । यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात भइसकेको छर । अहिले विमानस्थल भएर केही सामग्री मात्रै आइरहेको छर । गत वर्ष नेपालले चीनतर्फ २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको सामग्री निर्यात गरेको थियो । यस वर्ष १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँका सामग्री निर्यात गरेको थियो । आयात–निर्यात दुवै सामग्री यही नाकाबाट हुने गरेको थियो ।
रसुवागढी नाकाबाट आवत–जावत र यातायात चल्न छाडेपछि नेपालतर्फको टिमुरे बजार पनि सुनसान रहेको स्थानीय उर्केन घलेले बताए । रसुवागढी नाकामा माघ १० गतेदेखि हेल्थ डेक्स स्थापना गरी नेपाल प्रवेश गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको जाँच गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नाकामै रहेको उक्त टहराको हेल्थ डेक्स पनि सुनसान छ । नाकाको हेल्थ डेस्कमा अहिले चार जना स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
आइसोलेसन कक्ष स्थापना, बेत्रावतीमा हेल्प डेस्क राख्ने
कोरोना भाइरस (कोभिङ—१९) को शंकास्पद विरामीको उपचारर्थ रसुवा जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन कक्षको स्थापना गरिएको छ ।
जिल्लामा हालसम्म कोरोना भाइरस देखिएको छैन । शंका लागेमा अस्पतालमा तत्कालै आउन असपतालले आग्रह गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. अनिलकुमार खरेलले बताए । भाइरसको शंका लागेको विरामीलाई आइसुलेसनमा राखेर उपचार गरिने र उपचार हुन नसके काठमाण्डौ रिफर गर्न एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशरण कुइकेलले बताए ।
अस्पतालमा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका अल्मुनियमका बेडलाई प्रयोगमा ल्याई कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको हो । रसुवा जिल्लामा रोग भित्रन नदिन नाकामा सम्बेदनशिलता अपनाई दुई जना एमविविएस डाक्टर खटाई सकेको बताइएको छ ।
टेम्पल थर्मेमिटर, व्यक्तिगत सुरक्षा यन्त्र, केस रिपोर्टिङ फर्म्याट, ट्राभल हिस्टोरी, स्क्रिनिङ, स्याम्पल कलेक्सन फर सस्पेक्टेड र आइसोलेसन रुम (रसुवा जिल्ला अस्पताल धुञ्चे मा) व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए ।
त्यसै गरी रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको सिमानास्थल बेत्रावती बजारमा समेत हेल्प डेस्क राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, March 08, 2020 No comments:
नेकपाको बागमती विभागमा नुवाकोटका कसलाई कुन जिम्मेवारी
विदुर\_नेकपाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटी अन्र्तगतका विभिन्न ३० विभागहरूको गठन गरेको छ । जसमा नुवाकोटका नेताहरू ५२ जना समेटिएका छन् ।
३० वटा विभाग मध्ये नुवाकोटले दुई वटाको नेतृत्व गर्न पाएको छ भने दुई विभागमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाएको छ । अन्य २६ वटा विभागमा नुवाकोटका नेकपा नेताहरू सदस्यको भुमिकामा छन् । सबै विभागमा कम्तिमा एक जना सदस्य र बढिमा प्रमुख सहित तीन जना नुवाकोटका नेकपा नेताहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
१३ जिल्लालाई भुगोलका आधारमा विभाजन गरिएको विभागको जिम्मेवारीमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात विभाग र साहित्य कला तथा सांस्कृतिक विभागको नेतृत्व भने नुवाकोटले पाएको छ ।
त्यस्तै, संगठन विभाग र अर्थ तथा योजना विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी नुवाकोटका नेताहरूले पाएका छन् ।
त्यसो त नेकपा नुवाकोटका नेता पुष्प लामिछाने ‘अरुण’ उपप्रमुख रहेको विभागमा जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद हिरानाथ खतिवडा, संघीय सांसद नारायणप्रसाद खतिवडा पनि सदस्य छन् । प्रदेश सांसद तथा भौलिक पुर्वाधार तथा यातायता विभागका प्रमुख केशव पाण्डेलाई प्रदेश संसदिय विभागको सदस्यतमा पनि राखिएको छ ।
नेकपा बागमती प्रदेश संगठनको फागुन १६ मा सम्पन्न चौथो पुर्ण बैठकले नेताहरूलाई विभागको जिम्मेवारी सुम्पेको हो । यस अघि अनौपचारिक रुपमा विभिन्न विभागमा जिम्मेवारीमा रहने सुनिएका नेकपा नुवाकोटका केहि नेता तथा कार्यकर्ताहरूको नाम सूचीमा अटेको छैन । कतिपयलाई बिभागमा आफु मनोनित भएको जानकारीसम्म पनि नरहेको बुझिएको छ । नुवाकोटबाट प्रदेश विभागमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूमा महिलाहरूमा महिला बिभाग र समाज कल्याण बिभागमा एक÷एक जना छन् ।
नाम विभाग जिम्मेवारी
केशव पाण्डे भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात विभाग प्रमुख
केशव पुडासैनी ‘बिमल’ साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग प्रमुख
पुष्प लामिछाने ‘अरुण’ संगठन विभाग उपप्रमुख
रामशरण प्याकुरेल अर्थ तथा योजना विभाग उपप्रमुख
शिवकुमार चित्रकार उद्योग तथा बाणिज्य विभाग सदस्य
अनुजकुमार श्रेष्ठ उपभोक्ता हित तथा आपुर्ति विभाग सदस्य
बलराम अर्याल र रामकृष्ण सेढाई कृषि तथा भुमिसुधार विभाग सदस्य
रुद्र ढुङ्गेल र रामकृष्ण खड्का कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग सदस्य
नारायणबहादुर खनाल खानेपानी सरसफाई विभाग सदस्य
गणेशप्रसाद दाहाल र रामकृष्ण राजभण्डारी जलश्रोत, सिञ्चाई तथा उर्जा विभाग सदस्य
श्रीराम पाण्डे र राजुबाबु श्रेष्ठ न्याय, कानून तथा मानव अधिकारी विभाग सदस्य
लेलिन रञ्जित पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग सदस्य
देवचन्द्र भट्ट प्रचार तथा प्रकाशन विभाग सदस्य
हरिप्रसाद रिजाल र रामलाल श्रेष्ठ पार्टी स्कुल विभाग सदस्य
बद्री प्याकुरेल र नरेन्द्र प्रधान पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग सदस्य
प्रदीप थापा र नविन प्रधान युवा तथा खेलकुद विभाग सदस्य
बिरेन्द्र श्रेष्ठ र उत्तम श्रेष्ठ राजकिय मामिला तथा सुशासन विभाग सदस्य
सञ्चबहादुर तामाङ र निर्मल श्रेष्ठ बन तथा वातावरण विभाग सदस्य
रुपक तामाङ र कृष्णबहादुर प्याकुरेल विज्ञान तथा प्रविधि विभाग सदस्य
रामबाबु पराजुली र हरिकृष्ण अधिकारी शिक्षा तथा मानव श्रोत विभाग सदस्य
गोविन्द नेपाली र विकास रिजाल श्रम तथा रोजगार विभाग सदस्य
हिरानाथ खतिवडा र नारायणप्रसाद खतिवडा संगठन विभाग सदस्य
केशव पाण्डे प्रदेश संसदीय विभाग सदस्य
बच्चुमाया सुनारी मगर महिला विभाग सदस्य
दुर्गा पुडासैनी समाज कल्याण विभाग सदस्य
शम्भुप्रसाद पनेरु र राजु पराजुली सहकारी तथा गरिवी निवारण विभाग सदस्य
सुरेन्द्र राई र बिकास घलान शहरी विकास विभाग सदस्य
जितेन्द्रसिंह ठकुरी र अर्जुनकुमार श्रेष्ठ साहित्य कला तथा संस्कृति विभाग सदस्य
भैरबबहादुर अधिकारी र नारायणसिंह लामा स्थानीय तह विभाग सदस्य
शिवप्रसाद फुँयाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग सदस्य
रामचन्द्र थापा निर्वाचन विभाग सदस्य
काजीमान डंगोल र प्रकाश भट्टराई सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य
२४ योजनामा पौने तीन करोड
विदुर\_विदुर नगरपालिकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को प्रस्तावित तथा संशोधित योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रवार विदुरमा भएको नगरपालिकाको छैटौँ नगरसभामा विभिन्न २४ योजनामा २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने प्रस्ताव पारित भएको नगरप्रमुख सञ्जु पण्डितले जानकारी दिए । नगरसभामा पेश गरिएको योजनाहरू मध्ये वडा नम्बर १ को त्रिभुवन त्रिशुली बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि ४० लाख, वडा नम्बर १२ मा मुन्थला डिपबोरिङ आयोजनाका लागि २० लाख, वडा नं. २ मा भवन निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पण्डितका अनुसार विदुर नगरपालिकाभरी प्रयोग गर्नेगरी हिमपाइप खरिद गर्न ५ लाख रुपैयाँ, नगरक्षेत्रका सडकहरूको सामान्य मर्मतका लागि १८ लाख र वडाहरूको कार्यालय भवनमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
वडा नं. ७ तुप्चेमा निर्माण भएको स्वर्गिय पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति पार्कका लागि ५ लाख, नुवाकोट बार एसोसियसनको भवन निर्माणका लागि ५ रुपैयाँ, वडा नं. ४ मा वधशाला निर्माणका लागि २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वडा नं. ९ मा ‘सेग्रिगेसन’ हाउस निर्माणका लागि २२ लाख रुपैयाँ, विद्युत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा १० लाख, वडा नं. ७ मा चौतारा खेला मुहान गरी महादेवखर्क खानेपानी योजनामा ७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै विदुर नगरपालिकाको वडा नंं. १२ मा पन्थगाउँ माथिल्लोढाँड खानेपानी योजनालाई ५ लाख रुपैयाँ, वडा नंं ३ मा भोर्ले खोला खानेपानी योजनामा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उप प्रमुख गीताकुमार दाहालले जानकारी दिए ।
वडा नंं ५ को वाणाचौतारो खोल्ची तटवन्ध निर्माणमा ६ लाख, वडा नंं. ४ मा वालुवाटार सडक नाली निर्माणका लागि ७ लाख, वडा नं. ११ मा लिफ्ट खानेपानी योजनालाई ७ लाख, वडा नं. १ को त्रिशुली पुरानो बजार खानेपानी योजजालाई १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन
भएको छ । त्यस्तै वडा नं. ११ बरुटोल मन्दिर निर्माणमा ५ लाख, वडा नं.१३को
कन्यादेवी आधारभूत विद्यालयको घेरावार निर्माणमा ५ लाख, अपाङ्गता भएका व्यक्ति संस्था भवन निर्माण योजनामा ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख दाहालले बताए ।
विदुर नगरपालिकाकै वडा नं. ३ पुसुन्टार कृषि सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि ५ लाख, वडा नं. ११ को अजम्वरी कृषि सहकारी संस्थाको भवन निर्माणमा ५ लाख र ११ नं. वडाको गेर्खु वितलव भवन निर्माण गर्न ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । इन्फोग्राफिक्स :सुनील श्रेष्ठ
ब्याएका गाईभैसीलाई गाउँपालिकाको भत्ता
रानिपौवा\_ककनी गाउँपालिकाले पशुपालन र दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न गाइभैसीलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गर्न थालेको छ ।
२०७६\_७७ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाले वडा नम्बर ७ चतुरालेमा सुत्केरी गाइभैसीको किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको वडा अध्यक्ष पुष्कर बोगटीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा चतुरालेमा ६ वटा गाई र ५५ वटा भैसी सुत्केरी भएको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । ती ६१ गाईभैसीका किसानलाई ३÷३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको पशु सेवा शाखाका प्रमुख बाबुकाजी पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस अघि ककनी वडा नम्बर ८ थानसिङमा ७५ वटा सुत्केरी गाइभैसीलाई प्रोत्सहान भत्ता वितरण गरिएको थियो । गापा अध्यक्ष मानबहादुर लामाले पशुपालन र दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न पालिकाले ब्याएका गाईभैसीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेकोले र त्यसलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइने प्रतिक्रृया दिए । भत्ता लिन गाईभैसी ब्याएपछि पाढापाढी÷बाच्छाबाच्छी देखिने गरी दुध दोहिरहेको फोटो, किसानको नागरिकताको फोटोकपी र वडा कार्यालयको सिफारिस गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने छ ।
पुननिर्माणको अवस्था : दुप्चेश्वर पहिलो, बेलकोटगढी अन्तिम
विदुर\_जिल्लाको १२ स्थानीय तह अन्तर्गत सबैभन्दा बढी निजि आवास पुर्ननिर्माण सकिनेमा दुप्चेश्वर गाउँपालिका रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार दुप्चेश्वर गाउँपालिका भित्र रहेका ९० प्रतिशत लाभग्राहीले घर बनाइसकेर तेश्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् ।
अन्य स्थानीय तहहरूमा बेलकोटगढी नपामा ६८ प्रतिशत, विदुर नपामा ७५ प्रतिशत, ककनी गापामा ७६ प्रतिशत, किस्पाङ गापामा ८८ प्रतिशत, लिखु गापामा ७७ प्रतिशत, म्यागङ गापामा ८७ प्रतिशत र पञ्चकन्या गापामा ८२ प्रतिशतका दरले लाभग्राहीको निजी आवास निर्माण भइसकेको छ ।
यस्तै शिवपुरी गापामा ७८ प्रतिशत, सूर्यगढी गापामा ८० प्रतिशत, तादी गापामा ८६ प्रतिशत र तारकेश्वर गापामा ८७ प्रतिशत निजी आवास पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेको अनुदान व्यवथापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।
यसै बीच, विनासकारी भूकम्प २०७२ बाट निजी आवास गुमाएर लाभग्राही सूचीमा समावेश नुवाकोटका ७९ प्रतिशत भूकम्प पिडितले तेश्रो किस्ताको रकम बुझेका छन् ।
जिल्लामा भूकम्प पिडित लाभग्राहीको सूचीमा ७७ हजार ४२ घरधुरीको नाम समावेश छ । त्यसमध्ये ७३ हजार १८३ अर्थात ९५ प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझिसकेका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवथापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय नुवाकोटको अनुसार दोश्रो किस्ता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या ९० प्रतिशत अर्थात ६९ हजार ६१६ छ । अहिलेसम्म तेश्रो किस्ता रकम बुझ्नेको सङ्ख्या ७९ प्रतिशत अर्थात ६१ हजार ५३ रहेको छ ।
अनुदान व्यवथापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयको अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षती भएका घरको सङ्ख्या १६६२ रहेकोमा ९८८ ले सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम बुझिसकेका छन् । अहिलेसम्म १४ घरधुरीले मात्र दोश्रो किस्ता रकम बुझेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पुनराबेदन समितिका सदस्य भिष्मराज कडरियाले स्थानीय तहले गुनासो सम्बोधनका लागी पठाएको आबाश्यक कागजातले पुर्णता नपाएका कारण सबैको सम्बोधन नभएको बताए ।
यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले पुनःनिर्माणको बिषयमा समुदायमा बेमेल रहेको बताए । बास्तबिक पिडितको सम्बोधन नभएको र घर क्षती नभएकाहरूले अनुदान पाउदा समुदायमा बेमेल उत्पन्न भएको उनले बताए । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गल्ति स्थानिय तहले भोग्नु परेको बताए । गुनासो सम्बोधन, लाभग्राही छनौट र अधिकार प्रत्यायोजनमा प्राधिकरणले गलत गरेको बताए ।
सामुहिक आत्महत्या प्रयासमा श्रीमान् चाँही बाँचे
त्रिशुली\_विदुर नगरपालिका वडा नं. १ ढुंगेका एक नवविवाहित जोडीले सामुहिक आत्महत्या प्रयास गरेकोमा श्रीमतीको मृत्यु भएको छ ।
श्रीमान्को भने सामान्य अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको छ । पारिवारिक विवादका कारण जोडीनै घरको छतबाट त्रिशुली नदीमा एकैपल्ट हामफाल थिए । घटना बुधवार रातीको हो । भखैरै विवाह गरेका २२ वर्षीय मौषम खाती र २१ वर्षीया सञ्जु खाती आत्महत्या गर्न एकैपल्ट त्रिशुली नदीमा हामफालेका हुन् । उनीहरूको घर वरपरकाले नदीमा दुवै जना हामफालेको थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खवर गरेका थिए ।
त्रिशुली नदी किनारमै घर भएका उनीहरूले घरको छतबाट एकैपटक हामफाल्दा श्रीमती सञ्जुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने श्रीमान् मौशमलाई घटनास्थलबाट घाईते अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको छ । सञ्जुको टाउको ढुङ्गामा बज्रिएर घटनास्थलमै मुत्यु भएको थियो भने मौषम चाँही पानीमा परेकोले सामान्य अवस्थामा थिए ।
त्रिशुली नदीमा पानीको बहाव र सतह कम रहेकोले उनीहरूलाई प्रहरीले घटनास्थलमै फेला पारेको हो । उनीहरूको ६ महिनाअघि मात्रै विवाह भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
छिमेकीले पारिवारिक विवादका कारण दुवैले आत्महत्या प्रयास गरेको भनिएपनि पनि खास कारण भने खुलेको छैन ।
गर्भवतीको साथी उपाध्यक्ष
घलेभञ्याङ्ग\_पञ्चकन्या गाउँपालिकामा गर्भवतीको साथी उपाध्यक्ष कार्यक्रम सुरु भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती, सुरक्षित मातृत्वको प्रत्याभुती भन्ने नारा सहित उक्त कार्यक्रमको गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सुरुवात गरेका छन् ।
पालिकाभित्रका गर्भवतीका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुच र उपलब्धतामा वृद्धि गरी मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि सो कार्यक्रम सुरु गरिएको गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहआदुर तामाङले बताए । कतिपयले सयम सयममा गर्भजाँच गराउने नगरेकोले पनि यो कार्यक्रम सुरु भएको उनले बताएका छन् ।
गर्भ जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्था जाने प्रत्येक महिलाहरूलाई सो कार्यक्रम अन्र्तगत एक÷एक क्रेट अण्डा गाउँपालिकाको तर्फबाट उपलव्ध गराउन थालिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता खड्का पराजुलीले बताए । यस्तै पञ्चकन्या गाउँपालिकाले बच्चा जोखौँ, नुन बोकौँ कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ ।
बुद्धभुमीले उत्पादन थाल्ने
खरानीटार\_तल्लो तादीखोला जलविद्युत् आयोजनाले तीन महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने बताएको छ । सिभिल सहितको ८५ प्रतिशत काम सकिएकाले बाँकी काम छिटो बढ्ने आयोजनाको भनाइ छ । २०७७ जेठ मसान्तभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी निर्माण भइरहेको बुद्धभुमी नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठले बताएका छन् ।
आगामी तीन महिनामा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने तयारी गरेको बताए । आयोजनाले तादीखोला र चन्द्रवती खोलाको संगमस्थल समुद्रटार दोभानमा बाँध बनाएको छ ।
आयोजनाको विद्युत्गृहलगायत संरचना बाहिर छन् । बाँधस्थल दुप्चेश्वर गाउँपालिका–५ हुँदै पञ्चकन्या गाउँपालिका–४ थप्रेक नौटारीमा तीन हजार मिटर लामो पेनस्टक पाइपबाट विद्युत्गृहमा पानी पठाई बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको निर्माण लागत ९८ करोड रुपैयाँ छ । जसमा २५ प्रतिशत कम्पनीको सेयर र बाँकी सिद्धार्थ बैंकको अगुवाइमा बैक अफ काठमान्डु, एनसीसी, माछापुच्छ्रे बैंकलगायतको लगानी छ ।
राम मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा
त्रिशुली\_विदुर नगरपालिका–१ त्रिशुली बजारमा रहेको राम मन्दिरको मुर्तिमा बिहिबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न भएको छ । विनाशकारी भूकम्पले मन्दिरमा क्षति भएको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी मन्दिरको मुर्तीमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको राममन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
पहिलेको पश्चिम १ नं. भनिने नुवाकोट, धादिङ र रसुवाकै सबैभन्दा पुरानो बजार र केन्द्रका रुपमा लिइने नुवाकोटबासीको आस्थाको केन्द्र रहेको मन्दिरको पुनर्निर्माणको लागि विदुर नगरपालिका, स्थानीय नागरिकबाट एक करोड ४ लाख रकम संकलन जुटेको र अहिलेसम्म ९६ लाख खर्च भएको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । महोत्सवमा श्री १००८ कविराज देवाचार्य स्वामीको प्रमुख प्रवचन रहेको थियो । फाल्गुण १८ गते गएको आईतबार देखि सुरु भएको पाँच दिने उक्त महोत्सवमा भक्तालुहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको आयोजक संस्थाका नारायण श्रेष्ठले बताए ।
देउडी झोलुङ्गे पुल मर्मत सम्पन्न
विदुर\_साबिक कल्याणपुर गाबिसको ७ र ५ जोड्ने सामरी खोलाको देउडीस्थित झोलुङ्गे पुल मर्मत भएको छ । विदुर नगरपालिकाको २ लाख आर्थिक सहयोग र १ लाख स्थानीय जन श्रमदान गरि पुल निर्माण भएको स्थानीय पुल मर्मत समितिका रमेश थापा मगरले बताए ।
उक्त पुल साबिक कल्याणपुर गाबिसकै पुरानो झोलुङ्गे पुल रहेको थियो । स्थापना काल देखि काठको फट्टा भएको हुदा बार्षिक रुपमा परिवर्तन गरिरहने पर्ने हुँदा आर्थिक भार पर्दै आईरहेकोमा हाल काठ ठाउमा फलामको रड प्रयोग गरिएको छ । काठको फट्टा हुँदा दुर्घटना समेत हुने गरेको थियो । अहिले फलामको रड प्रयोग भएको पिटि अनलाईनले लेखेको छ ।
रंगशालालाई नुवाकोटबाट आलु
विदुर\_गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागी नुवाकोटका किसानहरूले आलु सहयोग गरेका छन् ।
नुवाकोट जिल्लाको लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिका कृषकहरूले आलु संकलन गरी खाद्यान्नको रुपमा सहयोग गरेका हुन् । आलु खेतिका लागि पकेट क्षेत्र मानिएको लिखु गाउँपालिका वडा नं. १, २, ४ र पञ्चकन्याको १ र २ वडाका १५० कृषकहरूले रंगशाला निर्माणमा सहयोग पु¥याउन आफ्नो उत्पादनबाटै सहयोग गरेका हुन् । उक्त आलुको बजार मुल्य तीन लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
१२५ बोरा आलु कृषकहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै भगवान पौडेल नेतृत्वको टोलीले चितवनस्थित रंगशाला निर्माणस्थलमै पुगेर हस्तान्तरण गरेका छन् । यसबाहेक थप डेढसय बोरा भन्दा बढीको परिमाणमा सहयोग संकलन भइरहेकोे पनि बताइएको छ । कृषकहरूले कृषि उपजहरू सहयोग गरेरपनि दिएर रंगशाला निर्माणमा योगदान पु¥याउने भन्दै यो अभियान थालिएको भगवान पौडेलले बताए ।
आलु सहयोग ग्रहण गर्दै रंगशाला निर्माण थालनी गरेको संस्था धुर्म‘स–सुन्तली फाउण्डेसनका कुमार कट्टेलले कृषकहरूको यस सहयोगले आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको बताए । ‘रंगशाला निर्माणको क्रममा निर्माण सामग्री र रकम सहयोगको साथमा यस्ता सहयोगहरू पनि अतुलनिय रहन्छ, उनले भने– नुवाकोटबाट सुरुभएको यो सहयोग अभियानलाई सारा नेपालीले अनुसरण गर्दा हामीलाई अन्तराष्ट्रिय महत्वको रंगशाला तयार गर्न थप सजिलो हुने छ ।’
दुई साता अघि मात्रै रंगशाला निर्माणको लागि नुवाकोटका आइचर ट्रक व्यवसायीहरूले ४० ट्रक वालुवा सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए । उनीहरूले उक्त बालुवा निर्माण स्थलमै पु¥याएका थिए ।
पिपल्टार\_अति विपन्न परिवारलाई रोजगार तथा आयामुलक कार्यक्रममा सरिक गराउँदै स्वाबलम्बनतर्फ अग्रसर बनाउने उद्देश्यसहित गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम अन्र्तगत विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ का विभिन्न कृषकसमुहलाई प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ ।
शुक्रवार वडा कार्यालयका एक कार्यक्रम गरी कृषक समुहहरूलाई कुटानी पिसानीको लागि औजार प्रदान गरेको हो । वडामा रहेका विपन्न नागरिकहरूलाई उनीहरूको सिप र दक्षताको विकास गरि स्वालम्बन बनाउन विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वडाअध्यक्ष शिव चित्रकारले बताए ।
उनले वडामा रहेको सिमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरी अहिलेको लागि प्रत्येक दुई समुह बराबर एक प्रविधि वितरण गरिएको जानकारी दिए । त्यसबाट प्रेरणादायि काम भएमा उक्त कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप थप मेसिन औजार प्रदान गर्ने बताइएको छ । चुलो र चौकोमा सिमित भएका महिलाहरूलाई मेसिनको प्रयोगबाट भएको आम्दानीले जीवन निर्वाहमा टेवा पुग्ने चित्रकारको विश्वास छ ।
डकैती मुद्दामा वडा सदस्य पक्राउ
विदुर\_शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का निर्वाचित सदस्य राजु थापा पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो काठमाडौंले डकैती मुद्दामा उनलाई पक्राउ गरेको हो । थापालाई ३२ तोला सुन डकैती गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले थापालाई डाँका मुद्दामा २०७५ साल असार ११ गते ४ लाख २० हजार जरिवाना र ६ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो ।
ब्यूरोको टोलीले काठमाडौंको मित्रनगरबाट थापालाई मंगलबार पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको र अदालतले उनलाई डील्लीबजार कारागार पठाएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार थापाले काठमाडौंको भिमसेनगोलाबाट २०५३ साल माघ १० गते राति ३२ तोला सुन लुटेर फरार भएका थिए ।
भन्सार छुट्याएर ल्याउँदै गर्दै थापाले बाटोबाटै लुटेर फरार भएको भन्दै छिरिङ वाङ्गेल घलेले मुद्दा दायर गरेका थिए । थापा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट विजयी भएका हुन् ।
दुई स्कुललाई बस अनुदान
विदुर\_बागमती प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले विद्यालय बस सेवा कार्यक्रमको लागि २५ वटा विद्यालय छनौट गरेको छ । त्यसमा नुवाकेटको दुई वटा परेको छ ।
मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय बस सेवा अनुदानको कार्यक्रमको लागि विद्यालय बस सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ बमोजिम प्रदेश भित्रको १३ जिल्लाका २५ विद्यालय छनौटमा परेका हुन् । मन्त्रालयद्धारा जारी सूचना अनुसार नुवाकोट जिल्लाका दुई वटा सामुदायिक विद्यालय विद्यालय बस सेवा कार्यक्रमको लागि छनौटमा परेको छ ।
छनौटमा परेको बिद्यालयहरूमा बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ रातमाटेको महादेव मावि र विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ को चण्डेश्वरी मावि छन् ।
नुवाकोट–हेटौंडा छोटो सडक मार्गको खोजी
विदुर\_नुवाकोट र रसुवा जिल्लाबाट बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा जोड्ने छोटो दुरीको सडक निर्माणका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण भएको छ ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने गैरी भन्ज्याङ थुम्कोबाट मकवानपुरको कैलाश, राक्सिराङ र मनहरी गाउँपालिका हुँदै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा ५२ किलोमिटरमा पुग्नेगरी नयाँ सडकको सम्भावना देखेर सर्वेक्षण गरिएको बताइएको छ । अहिले गल्छीबाट नारायणगढ हुँदै हेटौंडा पुग्न १७० किलोमिटर सडक रहेको छ । सडकको स्तरोन्नती गरेर दुईतर्फी मोटर गुड्न सक्ने बनाउन लाग्ने लागतको अनुमान गरी बजेट बनाउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकार र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताइएको छ ।
लागू औषध बिरुद्ध ऐक्यवद्धता
विदुर\_बागमती प्रदेशका निमित्त प्रहरी प्रमुख एसएसपी किशोर कुमार दाहाल गएको सोमवार नुवाकोटमा माईक्रोबसहरूमा लागू ब्यानर टाँग्दै गरेको भेटिए । लागूऔषध दुव्र्यसनी विरुद्ध नेपाल प्रहरीले थालेको साताव्यापी अभियान अन्तर्गत पहिलो दिन ‘स्वस्थ्य, सवल र समृद्ध नेपालको प्रतिवद्धता, लागूऔषध अपराध विरुद्धको ऐक्यबद्धता’ जस्ता नारा लेखिएका ब्यानरहरू टाँग्दै गरेको दृश्य यात्रुले अनौठोसँग हेरे ।
यस अभियानलाई साथ दिँदै थिए स्थानिय नागरिक अगुवा, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधिहरू, नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक अविनारायण काफ्ले, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटक उपप्रमुख अप्सरा थापा सहित, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ईन्द्रबहादुर पण्डित, विदुर नपाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुदेबकुमार पोखरेल । यसक्रममा उनले दर्जनजति बसमा दुव्र्यसनी विरुद्ध जनचेतनामुलक ब्यानरहरू टाँग्न भ्याए भने यस अभियानमा सहयोग गर्न यात्रुदेखि सबै सरोकारवालाहरूसँग अपिलसमेत गरे । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको ‘क्लिन बागमती’ प्रदेश अभियान अन्र्तगत गएको सोमबार नुवाकोटबाट सुरु भएको लागुऔषध ओसारपसार तथा दुव्र्यसनी विरुद्धको साताव्यापी अभियानलाई वागमती जिल्लाका १३ वटै जिल्लामा व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै निमित्त प्रमुख तथा एसएसपी किशोर कुमार दाहालले अभियान सार्थक बनाउने घोषणा गरे ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका नुवाकोट, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, सिन्धुली लगायतका केही जिल्लाहरूमा गाँजा र अफिमको खेती व्यापक रुपमा फस्टाइरहेको प्रहरीको आँकडाले देखाएको छ । त्यससँगै लागु औषधको सेवन, अबैध ओसारपसार र कारोबार पनि उच्च रहेको बागमती प्रहरी निमित्त प्रमुख दाहालको निष्कर्ष छ । ‘बागमती प्रदेश ‘लागू औषधविरुद्ध सबै सचेत बनौँ र यसको नियन्त्रणका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दै वागमती प्रदेशलाई लागु पदार्थ मुक्त बनाउने अभियान नै चलाएका हौँ’, एसएसपी दाहालले भने । अहिले किशोर किशोरी अथवा बिद्यालयका बिद्यार्थी यसको लतमा फसेको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको हुँदा युवायुवती जानेर वा नजानेर लागू औषधको दलदलमा फस्दै गएको देखेर लागू औषध प्रयोग निर्मुल पारिने नुवाकोट प्रहरी प्रमुख एसपी अविनारायण काफ्लेको दाबी छ । उनले भने– ‘लागू औषध प्राप्तिकै लागि उनिहरूले चोरी, लुटपाट, हत्या बलात्कार गर्ने गरेको पाईएको छ ।’ अहिले विशेष अभियानको रुपमा सामुहिक रुपमा प्रतिवद्धता गर्दै गाउँ टोल हुदै निर्मुल पार्ने कार्य थालेको बताउदै यो सुरुवात भएपनि अन्त्य नभएसम्म निरन्तर रुपमा लाग्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
चालू आबमा अपराध बढी
विदुर\_नुवाकोटमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा लागू औषधको मुद्दामा ३ जना पक्राउ परेका थिए । त्यसबेला दुई वटा मुद्दा रहेको थियो । वितेको तीन आर्थिक वर्ष र हालको आर्थिक वर्षको तुलना गर्ने हो भने यो वर्ष लागू औषधको मुद्दा ह्वात्तै बढको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिनामै सात वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा छ । त्यसमा १३ जना समातिसकेका छन् भने एक जना फरार छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ मा २ वटै मुद्दामा ७ जना पक्राउ गरेको तथ्याङ्क जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३ वटा मुद्दामा ६ जना पक्राउ परेको नुवाकोट प्हरी प्रमुख अभिनारायण काफ्लेले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका अनुसार विदुर नगरपालिकामा ११ वटा, बेलकोटगढी नगरपालिकामा एउटा, ककनी गाउपालिकामा दुईवटा १४ वटा मुद्दा अहिले अनुसन्धानमा छ ।
यसै बीच, लागू औषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्वन्धी साताव्यापी अभियान नुवाकोटमा सकिएको छ । ‘स्वस्थ, सवल र समृद्ध नेपालको प्रतिवद्धता, लागू औषध अपराध
विरुद्धको ऐक्यवद्धता’ भन्ने नारा सहित सञ्चालित लागू औषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्वन्धी साताव्यापी अभियान अन्तर्गत रहेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, विदुर नगरपालिका र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले संयुक्त रुपमा गएको सोमबार पहिलो दिन प्रभातफेरी कार्यक्रम गरिएको थियो ।
प्रभातफेरीमा सहभागिहरूले सुन्दर जीवनको रहर, लागू औषध दुरुपयोग असरबारे नबनौँ बेखवर, लागू औषध कारोवार एक पाप, यसले दिन्छ समाज र प्रियजनको घृणा र सन्ताप, स्वच्छ जीवन उच्च विचार, लागु औषधको गरौँ बहिस्कार गरौँ जस्ता वाक्यंशहरू लेखिएको प्लेकार्ड लिएका थिए ।
त्यस अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले लागू औषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार जस्ता अवैध क्रियाकलापमा आफ्नो सन्तानलाई सम्लग्न हुनबाट जोगाउने मुख्य भूमिका अभिभावकको रहेको बताए । प्रभातफेरी पछि आयोजित कोणसभालाई सम्वोधन गर्दै विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित, उपप्रमुख गीताकुमारी दाहाल, नेकपा नुवाकोटका प्रतिनिधि बुद्धिबहादुर प्रधान, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पण्डित लगायतले लागु औषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार हुने स्थानको पहिचान गरि कानुनी उपचारमा लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले सिंगो देश लागु औषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार मुक्त समाज निर्माण नभएसम्म यस्ता अभियानहरू सञ्चालन भइरहने बताए । नुवाकोट प्रहरी प्रमुख अविनारायण काफ्लेले पछिल्लो समय नेपालमा लागू औषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार जटिल समस्याको रुपमा रहेको बताए । हात हतियार कारोवार पछिको दोश्रो ठूलो अवैध कारोवारको रुपमा लागू औषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसार लाई लिने गरिएको भन्दै उनले युवा शक्तिहरू अवैध क्रियाकलापमा लाग्ने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
विदुर नगरपालिका वडा नं. २ नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको पृथ्विनारायण शाह संग्रहालयको अवलोकनका क्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, वडा अध्यक्ष विरेन्द्रकुमार शाही लगायतका । दरवार क्षेत्रको कुवापानीमा संग्रहालय बन्न लागेको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वय इकाई बवरमहलले ५ करोड २७ लाख रुपैयाँमा भवन बनाउदैछ । २०७६ असार २४ गते सम्झौता भएको संग्रहालयको भवन निर्माण कार्य २०७८ असार २३ मा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य चौकीको स्तर बढ्ने
विदुर\_सरकारको ‘एक पालिका, एक अस्पताल’ बनाउने योजना अनुसार यस वर्ष २३६ पालिकाका स्वास्थ्य संस्थालाई १५ वेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती हुनेभएको छ । त्यसमध्ये नुवाकोटको चार वटा र रसुवाको दुई वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नती हुने भएको छ ।
नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा रहेको काहुले स्वास्थ्य चौकी, तारकेश्वर गाउँपालिकाको दाङसिंह स्वास्थ्य चौकी, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको भद्रुटार स्वास्थ्य चौकी र ककनी गाउँपालिकाको ककनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नती हुने भएको हो । यसैगरी रसुवाको पनि २ स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नती हुने भएको छ । अधिल्लो वर्ष सरकारले २५१ पालिकाका स्वास्थ्य संस्थालाई १५ वेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरी भवन निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको छ । यस वर्षका लागि स्तरोन्नती गर्ने भनिएका स्वास्थ्य संस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।
प्रहरीले रोक्यो बाल बिबाह
विदुर\_नुवाकोट प्रहरीले गएको साता एउटा बाल बिबाह रोकेको छ । १६ वर्षिया बालिकालाई २४ वर्षिया पुरुषले विवाह गरिरहेको जानकारीको आधारमा शिखरवेशीमा बिबाह स्थलमै पुगेर नेपाल प्रहरीले बिबाह रोकेको हो ।
गएको सोमवार दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नंं ७ शिखरबेशीका उद्धव थापाले सोही गाउँका १६ वर्षिया बालिकासित बैवाहिक कार्यक्रम गरिरहेका थिए । थापा २४ वर्षका छन् । समुन्द्रटारबाट बिबाह रोक्नैकै लागि शिवखरशी पुगेका प्रहरीले जग्यमै स्थानीयहरू जम्मा गरेर सम्झाई बुझाई गरेको छ । कानूनले तोकेको उमेर अगाडी विवाह गर्न दण्डनिय भएको र बिबाहको कार्य सम्पन्न नभइसकेले तत्कालन रोक्नका लागि प्रहरीले आग्रह गरेका थिए । प्रहरीको आग्रह अनुसार उनीहरूको बैबाहिक कायक्रम रोकिएको बताइएको छ । बिबाह गर्न र बेहुली लिन गएकाहरू प्रहरीको कानूनी शिक्षा लिएर घर फर्किएका छन् ।
असहाय, जनजातिको लागि शिक्षा अभियान
बट्टार\_असहाय, जेहेन्दार तथा जनजातिको लागि शिक्षा संस्थाको १६ आंै बार्षिकउत्सब तथा छैठांै अधिबेशन सम्पन्न भएको छ ।
तारकेश्वर गाउँपालिका–५ स्थित कल्लेरीडाँडामा रहेको शंखादेवी माविमा भएको संस्थाको बार्षिक उत्सवको उद्घाटन गर्दै तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबहादुर वस्तीले आफनो गाउँपालिकामा असहाय, जनजातीहरूका लागि शिक्षा नामक संस्था रहँदा शिक्षामा धेरै फाईदा रहेको बताए । जेहेन्दार, आफन्त कोहि नभएका बालबालिकाहरू, जनजाती, गरिवहरूलाई यससंस्थाले ठुलो सहयोग गर्ने बिश्वास समेत रहेको उनले बताए ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तारादेवी रिमालले अनाथ बालबालिकालाई शिक्षित बनाउन र शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाको गठन भएको र समाजकै नमूना रहेकोमा प्रशंसा गरे ।
संस्थाका कोषाध्यक्ष राममणि अधिकारीले कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिशुली अस्पतालका २६ जना बिरामी र देबिघाट स्थित बृद्धाश्रममा रहेका ३१ जना बृद्वाबृद्वहरूलाई फलफुल वितरण गरेको बताए । उनका अनुसार तारकेश्वर मावि स्तरिय लोक नृत्य प्रतियोगिताको आयोजना समेत गरिएको बताए । जसमा पिमल्टार मावि पहिला, शंखादेवी मावि दोश्रो, श्रीकृष्ण मावि तेश्रो र पञ्चमिलन आधारमुत विद्यालयले सान्त्वन्ना स्थालन पाएका छन् ।
उक्त प्रतियोगितामा पहिलो, दोश्रो, तेश्रो र सान्त्वन्ना हुनेहरूलाई क्रमश आठ हजार, छ हजार, ४ हजार र २ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कारको दिइएको थियो ।
यसै बीच, संस्थाको छैठांै अधिबेशनबाट ११ जनाको नयाँ कार्यसमिति समेत चयन भएको छ । जसको अध्यक्षमा बाबुराम शर्मा अधिकारी, उपाध्यक्षमा, शेषराज शर्मा, सचिबमा, नबराज अधिकारी, सह सचिबमा, राजाराम अधिकारी र कोषाध्यक्षमा राममणि अधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
त्यस्तै, कार्यसमितिको सदस्यहरूमा गोरखबहादुर तामाङ, रबिन्द्र घिमिरे, रमेश घिमिरे, देबकी अधिकारी, सुमिता श्रेष्ठ र कञ्चन तामाङ छन् ।
आलु जोनमा फुर्पासिंगी
रसुवा\_आलु जोन परियोजना सञ्चालन गर्न जिल्ला स्तरीय नौ जनाको कार्य समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रसुवा मार्फत जिल्लालाई आलुजोन क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन कार्य समिति गठन भएको हो ।
कार्य समिति संयोजक फुर्पासिंगी तामाङ, सह संयोजक प्रमोदकुमार तितुङ, सचिवमा दावाफुर्वा तामाङ, सह सचिव कमला पुडासैनी, सदस्यहरूमा बालकृष्ण घिमिरे पेम्बा थोक्रा, पासाङ लामातितुङ, राधिका पौडेल र फुर्चुङ तामाङ छन् ।
गोसाइँकुण्ड र लाङटाङमा बिजुली विस्तार हुँदै
रसुवा\_रसुवा जिल्लाको दुई पर्यटकिय तथा धार्मिकस्थलमा बिजुली बत्ति पु¥याएनका लागि काम धमाधम भइरहेको छ । रसुवाको धार्मिक स्थल गोसाइँकुण्ड र पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङमा विद्युत् विस्तारलाई तीव्र पारिएको हो । ८ हजार ५ सय घर रहेको लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा विजुली वत्तिको लाइन लैजाने कार्य सुरु भएको हो । २०४० सालबाट नुवाकोटको त्रिशुलीदेखि रसुवामा विद्युत् विस्तार गरिएको थियो । रसुवाले विद्युत् भित्रिएको ३६ वर्षपछि उक्त क्षेत्रमा विद्युत् पुग्न लागेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धुञ्चे शाखाका प्रमुख कृष्णहरि दाहालले बताए । लाङटाङ र गोसाइँकुण्डलाई केन्द्रित गरी धमाधम विद्युत् विस्तार भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राविधकरणले जनाएको छ ।
लाङटाङमा लाइन विस्तार भइसकेको छ र लामा होटलदेखि लाङटाङ क्षेत्रका लागि बृद्धिमदेखि लामा होटलसम्म १९ किलोमिटर विद्युत् थप ६ किलोमिटरको दूरी लाइन तान्ने काम भइरहेको छ ।
गोसाइँकुण्डका लागि धार्मिक मार्गको चन्दनबारीसम्म विद्युत् विस्तार भइसकेको छ । लाङटाङपछि चन्दनबारी हुँदै गोसाइँकुण्डसम्म विद्युत् प्रवाह गरिने बताइएको छ । गेसाइँकुण्डमा विजुली वत्ति पुगेपछि त्यहाँ पुग्ने यात्रुहरूको बसोवास सहज हुने र त्यसबाट रसुवा जिल्लाको आयआर्जमा सहयोग मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।
चैत्रभित्र १० मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन हुने
विदुर\_नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणले देविघाटमा निर्माण गरिरहेको सौर्य उर्जाबाट आगामी चैतभित्र १० मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ । उक्त परियोजनाबाट २५ मेगावट बिजसली वत्ति उत्पादन हुन्छ । घामबाट विजुली निकाल्ने प्रविधि मध्ये यो नै नेपालको सबै भन्द ा ठूलो आयोजना हो ।
तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न अहिले तिव्र गतिमा काम भइरहेको छ । देविघाट पावर हाउसको खाली जमिन फोरवेमा प्यानल जडानको लागि खम्बा जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ । देविघाट पावरहाउसको खाली जमिन फोरवेमा प्यानल जडानका कार्य सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी रातमाटेमा प्यानल राख्नका लागि जमिन सम्माएर ‘लेवल’ नाप्ने काम भइरहेको आयोजनाका उपप्रवन्धक विकास रघुवंशीले जानकारी दिए । उनले आगामी चैतभित्र १० मेगावट विद्युत निकाल्ने बताए । अहिले फोरवे क्षेत्रको काम सम्पन्न गरेर रातोमाटेमा काम थालिएको छ । आयोजनाको लागि चाहिने ५० प्रतिशत सामान ल्याइसकिएको बताइएको छ ।
वन्यजन्तुको अवैध चोरी नियन्त्रणमा सफलता
बेत्रावती\_निकुञ्ज संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागी विशेषगरी वन वन्यजन्तुको अवैध चोरी शिकार तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागी नेपाली सेना तथा निकुञ्जको प्रयास सफल रहेको छ ।
बुधबार एक कार्यक्रम गरि अपरेशन महाहन्ट सम्बन्धि जानकारी गराइ वन डढेलो सचेतना नियन्त्रणका उपाय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सुचना आदान प्रदान र वन डढेलो नियन्त्रण मा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपाली सेनाको भुमिका बारे छलफल गरिएको हो ।
वन प्राविधिक एवम रेञ्जर रमेश वस्नेतका अनुसार फागुन एक देखी २०७० जेठ मसान्तसम्म महाहन्ट अपरेशन सुरु गर्ने र नेपाली सेनाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका स्थित भोटाङ र नेसमपाटी, नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिका स्थित घ्याङफेदी रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका को बृद्धिम र खाम्जीङ सेनाको जहाँ पोष्टहरू छन् त्यहा महाहन्ट गतिविधि हरू सञ्चालन गरिने छ । रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला गरि ९ वटा गाउँपालिकाहरूमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थानहरूमा महाहन्ट अपरेशन हुनेछ ।
आयोजनाको प्रगती सन्तोषजनक भएन
विदुर\_‘गेम चेञ्जर’ भनिएका २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा सन्तोषजनक प्रगती हुन सकेको छैन ।
अधिकांश आयोजनामा दक्षजनशक्तिको अभाव देखिएको छ भने निर्माण सामग्री एवम् इन्धन ढुवानीमा समेत समस्या देखिँदा ती आयोजना लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १९ अर्ब २४ करोड अर्थात् १८.७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले पनि आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ ।
राष्ट्रिय गैरबको रुपमा राखिएको गल्छि त्रिशुली सडक आयोजनाको पनि कार्य प्रगती सन्तोषजनक छैन । तिन पटक सम्म सायाबधि थपिएको आयोजनाको ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । त्रिदेशिय मार्गको रुपमा रहेको गल्छि त्रिशुली रसुवागढी सडक आयोजनाले पहिलो खण्ड अन्तर्गतको गल्छिदेखि त्रिशुलीसम्म मुअब्जा बिबादले काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
२०७६ फागुन २६ गतेको सम्पादकीय
खाद्यान्न भण्डारण नगरौं
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसको त्रासले स्थानीय स्तरमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य संकटमा पर्ने अनुमान छ छदैनै छ । त्यो भन्दा पहिला दैनिक जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई सिधासिधा प्रभाव पार्न थालेको देखिएको छ । विशेष गरी दैनिक उपभोग्य बस्तु र चीनबाट नेपाल आयात हुने कपडा तथा इलेक्ट्रिक सामानहरूको अभाव र मनमौजी बजार भाउ देखापर्न थालिसकेको छ । कोरानोले उत्पातै गर्ने नागरिकहरूको बढिनै त्रासदिपूर्ण सोचाईका कारण बजारले उपभोक्ताको माग अनुसारको सामान दिननसक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । नुन, तेल, मसला, दाल, चामल, पिठो, एलपी ग्यास जस्ता उपभोग्य र दैनिन्दिय आवश्यक सामाग्रीहरू नागरिकहरूले बढिनै जम्मा गर्न थालेपछि त्यसको असर बढि देखिन थालेको हो ।
सरकारले मानिसहरू भेला हुने, सभा सम्मेलन गर्ने कुराहरूका नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्यो, विद्यालयहरूलाई आफ्नो नियमित शैक्षिक गतिविधिहरूलाई छोट्याएर वा छिट्टै सकेर चैत ६ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्न नै उर्दी जारी गर्यो । जसले गर्दा अब चाँहि संकटनै आउन लागेको भन्ने बुझाई आम नागरिकहरूमा परेको छ । जुन गलत हो । संक्रमण नफैलनका लागि पुर्वसावधानी अपनाईएको यो अभियानलाई ठूलै विपत्ति आउन लागेको जसरी नागरिकहरूले बुझ्ने गलत छ । एकै घरपरिवारले महिनौंसम्म पुग्ने सामाग्रीहरू भण्डारण गरे राख्न थालेपछि सामाग्रीको अभाव हुनु स्वाभाविकै हो । र त्यस्तो माग धेरै भएको मौकामा गलत मनसाय भएका केही व्यापारीहरूले सामान लुकाउने वा भाउमा कालोबजारी गराउने खतरा उत्तिनै रहन्छ । त्यसैले सावधान अपनाउनका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई संकटको अवस्थाको रुपमा बुझेर आवश्यकता भन्दा बढी सामाग्रीहरूको भण्डारण नगरौं । बजारमा भएका उपभोग्य सामान सबैले बरोवरी रुपमा निरन्तर पाइराख्ने अवस्थाको सृजना उपभोक्ता वा सचेत नागरिकहरू स्वंयम्ले गरौं ।
एक साथ छौं
लोक कल्याणकारी सन्देश
लागू औषध रहित, स्वस्थ र सुखी जीवनको कामना ।
सडकको धुलोमा ध्यान दिउ
सामान्यताया योजना तथा पूर्वाधार बिस्तारसंगै स्थानीयको दैनिकी र जीवनयापन सहज हुनेगर्दछ । तर यस्ता योजना र पूर्वाधार निर्माणको क्रममा निस्कने बिकार तथा धुलोमैलो र छारो नियन्त्रणमा सावधानी नअपनाउँदा नुवाकोटमा पर्यावरण र जनस्वास्थ्य गम्भीर असर हुन पुगेको छ ।
दर्घिकालिन हित र सुविधाका लागि पछिल्लो समय नुवाकोट जिल्लामा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत करोडौं लगानीका सडक तथा खानेपानी योजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । तर पूर्वाधार निर्माणको क्रममा स्थानीय जनजीवनमा तत्काल र प्रत्येक्ष असर गर्ने धुलोमैलो तथा छारो नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकाय उदासिन बन्दा नुवाकोटमा स्थानीय पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रत्येक्ष असर परेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणको क्रममा सतहमा देखिने यस्ता बिकार तथा धुलोमैलो र छारो नियन्त्रणको जिम्मेवारी र नैतिक दायित्व निर्माण कम्पनिको हुने गर्दछ । योजना निर्माणको सम्झौतामै पर्याबरण जोगाउनको लागी अपनाउनुपर्ने साबधानिको लागी बजेट बिनियोजन भएको हुन्छ । यति धेरै दायित्व हुने भएपनि नियामक तथा सरोकारवाला निकायहरू आयोजना पक्ष लगायत स्थानीय तह र प्रशासन कार्यालयले नियन्त्रणमा चासो र दबाब सिर्जना नगर्दा त्यसको असर पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा परेको हो । जसका कारण नुवाकोट सदरमुकाम बिदुर लगायत नगरपालिका आसपास क्षेत्रका बायुमण्डल धुलोले ढाक्नुका साथै सर्वसाधारण तथा बटुवाहरूमा रुघा, खोकी, श्वासप्रश्वास लगायत क्षयरोगको जोखिम बढेको छ । जसले विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ह्वात्तै बढाउछ ।
बिशेषगरी जिल्लामा हाल निर्माणाधिन बिदुर खानेपानी आयोजनाको पाईपलाईन बिस्तार तथा मध्येपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत छहरे–ढिकुरे–गंगटे सडक लगायत स्तरोन्नतीको क्रममा रहेको पासाङल्हामु सहायक मार्ग अन्तर्गत बालाजु–त्रिशुली सडक र गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक योजनाजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा यस्ता समस्या चर्को पाईएको छ ।
सामान्यतया निर्माण स्थलमा दैनिक एकदुई पटक पानी छरेर सजिलै धुलोमैलो तथा छारो नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि निर्माण पक्षले मुनाफामा बढी जोड दिने र नियामक तथा सरोकारवाला निकायले नजर अन्दाज गरेका कारण नुवाकोटमा अहिले पूर्वाधार निर्माणसंगै आम सर्वसाधारणले हैरानी र सास्ती खेप्नु परेको छ । यस तर्फ तुरुन्तै ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ ।
२०७७ साल बैशाख १ गतेबाट
नुवाकोट रेडियो सञ्जालको प्रस्तुती
स्कुलमा सरकारको हस्तक्षेप
सेढाईं (बाँयाँ) लम्साललाई मायाको चिनो प्रदान गर्दै । तस्बिर :रोशन\_इमेज ढाडेफेदी\_स्थानीय सरकार स्थापनासंगै सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति...
तारकेश्वर गाउँपालिकाका झरनाहरु
तारकेश्वर गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नै लाग्दा मुख्य सडकमा देखिने छाङ्गे झरना राजु रिमाल तारकेश्वर/तारकेश्वर गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नै...
देउसी भैलो खेल्दै त्रिशुलीका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू
विदुर/धार्मिक सहिष्णुता बढाउन आग्रह गर्दै नुवाकोटमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले हिन्दूहरूसँगै यो पालीको तिहार पर्व मनाएका छन् । तिहारको रौनक ब...
चिम्टेश्वरमा भ्यू टावर र पार्क बन्ने
बेलकोटगढी/नुवाकोटको बेल्कोटगढीमा रहेको चिम्टेश्वरमा बन्ने पार्क र ‘भ्यू टावर’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डिपिआर’ तयार भएको छ । नुवाक...
तीन वर्षिया बालकको हत्या
विदुर/बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा खुर्पा प्रहार गरी एक महिलाले तीन वर्षे बालकको हत्या गरेका छन् । बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर १...
ल्यान्डफिल्डको समस्या जस्ताको तस्तै
उषा रेग्मी विदुर/एक बर्ष भित्र निर्माण सक्ने सम्झौता भएपनि नुवाकोट स्थित ककनी गाउँपालिकाको बञ्चरे डाडा ल्यान्डफिल्डको समस्या जस्ताको तस्...
१ टिभी त्रिशुली कपिलदेव खनाल ९८५१०९३२९०
२ रेडियो त्रिशुली ८८.४ मेगाहर्ज कपिलदेव खनाल ९८५१०९३२९०
३ रेडियो जालपा १०४.५ मेगाहर्ज जगदीश खनाल ९८५१०८०१२२
४ नुवाकोट एफएम १०६.८ मेगाहर्ज श्रीराम अधिकारी ९८५१०८९५३३
५ रेडियो सञ्जिवनी ८९ मेगाहर्ज गमला लामा ९८६००४५३१४
६ फ्रेण्ड एफएम ९०.९ मेगाहर्ज राकेश डङ्गोल ९८६१५४१७२३
७ मिक्स एफएम ८९.४ मेगाहर्ज रुपा अर्याल ९८६००४७०७४
८ गज्जवको रेडियो १०५.७ मेगाहर्ज पुरुषोत्तम बस्नेत ९८५१०९७५५१
९ त्रिशुली खबर साप्ताहिक नवदीप श्रेष्ठ ९८५१११०६४५
१० ईमेज साप्ताहिक शर्मिला उप्रेती ९८४१०८७०००
११ नुवाकोट पुकार साप्ताहिक सुकदेव दाहाल ९८४१९६७३४८
१२ सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक किरण प्र. अधिकारी ९८४३३२११५४
१३ त्रिशुली प्रबाह साप्ताहिक शरण उत्सुक ९८५१००२९३८
१४ रुपायन त्रैमासिक नवदीप श्रेष्ठ ९८५१११०६४५
१५ महामण्डल त्रैमासिक श्रीराम श्रेष्ठ ९८५१०३२५४८
१६ डवली खबर डट कम ध्रुवकुमार रावल ९८५११६१७८५
१७ नुवाकोट जागरण साप्ताहिक शिव देवकोटा ९८५१२३४९८०
१८ उत्तरगया दैनिक शिव देवकोटा ९८५१२३४९८०
१९ रेडियो भैरबी ८८ मेगाहर्ज देवचन्द्र भट्ट ९८५१०६७३१५
▼ March 8 - March 15 (30)
पुननिर्माणको अवस्था : दुप्चेश्वर पहिलो, बेलकोटगढी ...
► November 10 - November 17 (18)
यो ब्लगमा राखिएका समाचारहरु प्रति इमेज साप्ताहिक पूर्ण रुपले जिम्मेवार छ, भने विचार र लेखहरु लेखकको. Watermark theme. Powered by Blogger.